स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव – इन्सेक
स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव
तनहुँ ०७३ पुस ७ गते
जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव भएको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य चौकीहरूमा पठाउनु पर्ने औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा औषधिको अभाव भएको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूबाट क्रमशः ५८ र ३५ प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने भएपनि ती मध्ये अत्यावश्कय केही औषधिहरू केही दिन यता अभाव भएको हो ।
हाल स्वास्थ्य चौकीहरूमा सिटामोल, आइरन चक्की, जीवनजललगायतको अभाव भएको छ । जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधिहरू वितरण गरिएपनि जिल्ला अस्पतालले पनि ५१ प्रकार भन्दा बढीको औषधि वितरण गर्न सकेको छैन ।
जामुने स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज तिलकराज घिमिरेले औषधिको अभाव भएको भन्दै बिरामीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । इन्सेकले ०७३ पुस ७ गते जामुने स्वास्थ्य चौकीको भ्रमणको क्रममा इञ्चार्ज घिमिरेले पर्याप्त औषधिहरू नभएको हुँदा बिरामीलाई त्यसै अनुसार दिन बाध्य भएको बताएका थिए ।
केन्द्रले उपलब्ध गराउने औषधि समयमै नपठाउँदा जिल्लास्थित अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूले बिरामीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने औषधि वितरण गर्न नपाएका हुन् । हालै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाकै बजेटबाट बढीमा दुई महिनाको लागि औषधिको व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. पवनजङ्ग रायमाझीले जिल्लाकै बजेटबाट व्यवस्था गरेर हाललाई बढीमा दुई महिनाको लागि मात्र औषधिको व्यवस्था भर्खर गरिएको र उक्त औषधिहरू स्वास्थ्य चौकीहरूमा केही दिन भित्रमा पुगिसक्ने बताए ।
तर, दुई महिना भित्र केन्द्रले खरिद प्रक्रिया पुरा गरेर औषधि उपलब्ध नगराए जिल्ला भर नै औषधिको अभाव हुने डा. रायमाझीले बताए । जिल्ला अस्पतालले ७० प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने भनिएपनि आफूहरूले हाल ५१ प्रकारको मात्र व्यवस्था गरिएको डा. रायमाझीको भनाइ छ ।
निशुल्क वितरण गरिने औषधिमा केन्द्रको ७०, क्षेत्रको २० र जिल्लाको १० प्रतिशत हिस्सा रहन्छ । तर, केन्द्रले २ वर्षदेखि औषधि उपलब्ध नगराएको डा. रायमाझीले बताए ।